तीनदिने विश्व विज्ञ सम्मेलन आजबाट, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने « Gaunbeshi
तीनदिने विश्व विज्ञ सम्मेलन आजबाट, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने
काठमाडाैं। तीनदिने दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन आजबाट सुरु हुँदैछ।
भर्चुअल माध्यमबाट हुने सम्मेलनको उद्घाटन अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारको सहआयोजनामा भएकाे सम्मेलनकाे उद्घाटन सत्रलाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, शेष घले, भवन भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासहितले सम्बाेधन गर्ने भएका छन्।
२५ भन्दा बढी देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ।
सम्मेलनमा २०० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने सम्मेलनका संयोजक तथा गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा चारवटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता दिएका विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।
सम्मेलनको पहिलो दिनका विभिन्न सत्रमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, प्रविधिमैत्री र स्टार्ट अप कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार विकास, कोरोना महामारीको कहर र सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि तथा बजारीकरणका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुने संघले जनाएकाे छ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप संकट व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि नीति तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव र पुनरुत्थान लगायतका सत्रहरु समावेश गरिएका छन्।
तेस्रो दिन जीवन र स्वास्थ्य विज्ञान, उर्जा, आर्थिक रुपान्तरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, वातावरण र समाज विज्ञानका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छन्।
सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र एवं निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहयोग तथा सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरू, नेपालमा रहेका विज्ञहरु, र नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञहरू समेत सहभागी हुने संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले बताए ।
विदेशमा रहेका र विदेशबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई नेपालको विकास एवं समृद्धिका लागि प्रयोगमा ल्याउन संघले सो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो।
सम्मेलन पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघले एक श्वेतपत्र जारी गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ।